Waa maxay fasalka USAHello iyo sababta ay lacag la'aan ah waa? | USAHello | USAHello
USAHello bixisaa fasalka a free online si loo caawiyo dadka ku guulaystaan ​​Maraykanka of America. Baro sababta aan u bixiya fasalo lacag la'aan ah qaxootiga iyo doolka. Ogow cidda aynu nahay iyo sababta ay gool our si ay u caawiyaan dadka cusub ee USA.
Naser Yahya (guddiga la-talinta) iyo Tej Mishra (guddiga agaasimayaasha) kulanka guddida ee USAHello in 2018.
Waa maxay sababta fasalada free?
fasalada waa lacag la'aan si ay u noqon kartaa u furan qof kasta. Qasab ma aha in aad bixiso maxaa yeelay USAHello waa aan faa'iido-. A aan faa'iido doon ahayn waa urur aan dadka lacag dambe ka waxa ay kaa caawinaysaa ka dhigi. Dadka daryeela oo ku saabsan qaxootiga iyo doolka siin lacag si USAHello fasalka online noqon kartaa adeeg lacag la'aan ah. USAHello waxaa xiran oo aan dawladda wax kasta oo.
Waa maxay sababta aan ku siin macluumaadkayga?
Ma aha in aad siiso macluumaadka adiga kugu saabsan, laakiin waxaad u baahan doontaa in aad isticmaasho cinwaanka email ah in lagu qoro. cinwaanka email Your noqon doonaa magacaaga account. In xisaabtaada, waxaad kala socon kartaa of casharada iyo aad yaryar dhameystiran. Waxaan kuu soo diri doonaa emails ku saabsan horumarka. Haddii aad rabto in aad noo si ay u joojiyaan emails aad diraya, aad noo sheegi kartaa.
ma i siinaysaa intaad shahaadada GED® ama dhalashada?
fasalada Our idiin diyaariyo in ay qaataan GED ah® baaritaanka iyo imtixaanka jinsiyadda Maraykanka. fasalada Our aadan siin GED a® diblooma ama dhalashada Mareykanka. Waa in aad si xarun imtixaanka si rasmi ah u tag si aad u hesho GED® shahaadada. Waayo, jinsiyadda, waa in aad codsato in dawladda Maraykanka.
Haddii website kasta oo uu kuu sheegayaa waxay ku siin doontaa shahaado GED® ama dhalashada Mareykanka, waxaa run ma aha. Waa website xun. Iyaga ha ka siiyo lacag ama macluumaadka shakhsiyeed.
Sidee si looga fogaado in khiyaamo iyo websites xun
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah warbixin wanaagsan on websites kale:
Read waxa GED® Service Imtixaanka wuxuu leeyahay oo ku saabsan sida loo naftaada ka khiyaamo imtixaanka ilaaliyo
Baro sida loo garto website been abuur ah
Ogow sida loogu garto GED® been abuur ah ama shahaadada dugsiga sare
Kurtumm - waxa qaar ka mid ah ardayda yidhaahdo oo ku saabsan fasalka USAHello ah
"Waxaan hore u lahaa shahaadada dugsiga sare ka dalkiisa hooyo aan, laakiinse anigu uma aan wareejiyo yaabaa shahaado aan ka dibada. diyaarinta imtixaanka iyada oo loo marayo USAHello ahaa dhaqanka weyn. Waxaan ka heli doontaa kulliyadda ". - Wes, cusub ka Pakistan
"Waa cajiib adag tahay inay helaan qalabka si ay u bartaan Sawaaxili. By ka barta labada Ingiriisi iyo Sawaaxili, Waxaan dareemay kalsooni ku qaba in aan mari karin cilmiga bulshada ah ". - Saloome, qaxooti ka soo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo
"Aad ayaan ugu faraxsanahay in ay helaan kheyraadka sida USAHello si ay u caawiyaan i baran waayo, GED ahay." - Sainte Fathiah
"Waxaan doonayaa inaan ku mahadsantahay inaad dhibaato aad u fiican shaqo sababta oo ah nolosha ma aan u qalin jebiyaan laga yaabaa dugsiga sare laakiin lay soo socda waxbarashada GED aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay oo ku riyaaqayaa cashar kasta lagu ahay." - arday kulliyadda la filayo in New York
"Waxaan soo qaatay dib u eegis USAHello GED ah si ay u caawiyaan i gudbin imtixaanka GED ee California. Waxaan gudbay imtixaanka GED aan dhammaan maadooyinka ku saabsan isku day ugu horeysay. Waxaan ahaa awoodaan in ay isku qoraan dabcan Wadnaha Monitor a farsamo. Hadda waxaan ka codsan kartaa koorsooyin kuliyadeed iyo codsato shaqo fiican oo bixiya gargaarka wanaagsan ". - Nick Esquibel
“Waxaan soo qaadan doonaa GED ah® fasalada diyaarinta si aan waxbarashada waxaan ku dhameysan karaan iyo shaqo fiican ka heli.” - Sabitra, qaxootiga ka Bhutan
Ha aad qabto wax su'aalo ah ama walaac ah oo ku saabsan fasalada our? Fadlan email noogu!
badan oo ku saabsan GED® ka Baro, HiSet iyo TASC imtixaamaa iyo sida loo helo xarunta imtixaanka a
Raadi fasalada GED® iyo dhalashada iyo khayraadka kale ee waxtar leh FindHello
Read sheekooyinka by qaxootiga iyo doolka ee Voices